musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Zvitsva zveUS zvirambidzo zvekufamba mushure mekutyisidzira kweOmicron
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Nzira itsva dzekufamba dzinouya mushure mekunge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yasimbisa nyaya yekutanga yeUS yeOmicron musiyano muCalifornia mumunhu akasvika achibva kuSouth Africa musi wa22 Mbudzi.
Zviremera zvehurumende yeUS zvakagadzirirwa kuzivisa zvirambidzo zvitsva zveCCIDID-19, izvo zvingada bvunzo isina kunaka mukati mezuva rimwe chete rekufamba kune vese vanosvika kune dzimwe nyika, kusanganisira vashanyi vakabayiwa zvizere.
Nzira itsva dzekufamba dzinouya mushure me Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yakasimbisa nyaya yekutanga yeUS yeOmicron musiyano muCalifornia mumunhu akasvika achibva kuSouth Africa musi wa22 Mbudzi.
Mufambi akabaiwa zvizere akazovhenekwa munaNovember 29 mushure mekuratidza zviratidzo zvakapfava.
"CDC iri kushanda kugadzirisa yazvino yekuyedza yepasirese kurongeka isu tichidzidza zvakawanda nezve omicron musiyano, " CDC Mutauriri Kristen Nordlund akasimbisa nemusi weChina, achiwedzera kuti "murairo wakadzokororwa uchapfupisa nguva yekuedzwa kunodiwa kune vese vanofamba nendege vekunze kusvika zuva rimwe chete vasati vasimuka."
Parizvino, US inoramba kupinda kune vanhu vasina kubayiwa kubva kune dzimwe nyika, nepo vanhu vakapihwa vaccine zvizere vakagamuchira vaccine vanogona kuenda kuAmerica kana vakapa bvunzo isina kunaka yeCCIDID-19 yakatorwa mukati memazuva matatu vasvika. The CDC inokurudzirawo vanhu vakabaiwa nhomba pazuva rechitatu kusvika rechishanu mushure mekunge vapinda muUS.
Sechikamu chematanho akatarwa kuti atange kushanda, CDC yakazivisa kuti iri kushanda mukusimudzira ongororo panhandare dzayo huru dzendege dzepasi rose, muAtlanta, New Jersey, New York, neSan Francisco, kuitira kuti vakuru vakuru vape Covid bvunzo dzekunze. vafambi.
Mitemo yekufamba, yakasanganiswa nekudaidzira kuti vanhu vese vekuAmerica vatore mushonga weCCIDID-19 uye vapfurwe kana vapfuura makore gumi nemasere uye vaine dosi ravo rechipiri mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, rakagadzirirwa kubatsira kutakura kupararira kwechirwere chitsva. kudzivirira iyo US kukurirwa nefungu idzva rehutachiona.
The World Health Organization (WHO) yakaratidza Omicron se "mutsauko wekunetseka" svondo rapfuura, mushure mekunge yaonekwa munyika dzinopfuura makumi maviri.
Padivi pezita rayo, iyo WHO yakadana kukwidziridzwa kwekutarisa uye kuyedzwa, pamwe neCCIDID-19 matanho ekuchengetedza, akadai sekupfeka mask uye kushamwaridzana.
Wendy Rajabpour anoti:
Zvita 10, 2021 pa17: 10
Ndinofarira kuverenga nyaya dzaunovhara. Kuve muIndasitiri Yekufambiswa Ndinonzwa zvakafanira kuti ndigare ndichiziva.